Gbochi igbu mmadu | Apg29
Gbochi igbu mmadu
A ga-amachi ụdị igbu mmadụ niile!
Igbu mmadu ozo adighi agha agha. Igbu mmadu bu igbu mmadu ma aghaghi igbachi ya!
Ọpụpụ 20:13 Egbula ọchụ.
Echere m na a ga-amachibido ụdị igbu ọchụ niile.
A ga-egbochi nke a:
Ntaramahuhu nke isi
Agụrụ m ebe na Swede abụọ ọ bụla bụ maka ntaramahụhụ ọnwụ, ma ọ nweghị ntaramahụhụ ọnwụ na-eme ka mmadụ bụrụ onye ka mma.
Ndị mmadụ kwesịrị ịnụ banyere Jizọs ka ha wee nwee ike ịnata ya wee zọpụta ha.
Igbu mmadu bu igbu mmadu ma aghaghi ikwusi ya. Igbu mmadu ozo adighi agha agha.
Euthanasia na-arịwanye elu karịa ndị Sweden na ọ kwesịrị ịbụ nke iwu. N’oge na-adịbeghị anya, otu dọkịta “nyeere” onye ọrịa aka ịnwụ.
Mba, obughi onye juru ogwu ahu kama o nwetala ya ma guzoro ya nso.
Ihe ruru puku iri anọ na-anwụ n'ime nne kwa afọ.
Igbu mmadu bu igbu mmadu ma aghaghi igbachi ya!
Igbu mmadu ozo adighi agha agha.
Vecka 10, måndag 8 mars 2021 kl. 10:09